အဖြေ Time | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » အဖြေ Time
Posted by မြစပဲရိုး on Sep 26, 2015 in Critic | 14 comments
သူ မရှိတဲ့ အချိန် ဘယ်သူ့ ကို အားကိုးကြမလဲ တဲ့။
အဖြေ က ရှင်းရှင်း လေးပါ။
“စနစ်ကောင်း” တစ်ခု ကို အားကိုးချင် ပါတယ်။
“အားကိုးချင်” လို့ဘဲ ပြောတာ က “အားကိုးလို့ မရနိုင်သေး” လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘယ်လူ ကို မှ ကြည့်နေ အားကိုး နေစရာ မလို တဲ့ ကောင်းမွန် ပြီး အားကိုးရတဲ့ စနစ်ကောင်း လေး တစ်ခု ရ အောင် လားရာတူ ကို ဝိုင်းပြီး တွန်း ပေးကြပါ။
ဒီလို လူ တစ်ယောက် နောက်ထပ် မရနိုင်တော့ လို့ပါ။
သူ မရှိ ရင် ဘယ်သူ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးနေမဲ့ အစား သူမရှိလဲ ရ အောင် ဒီတစ်ခါတော့ ညီညွတ်ပေးကြပါ။
. ပြောကြလေ့ ရှိတဲ့ စကားလိုပါဘဲ။
ဘယ်သူတက်တက် ကောင်း မှာ မဟုတ်တဲ့။ မှန်ပါတယ်။
စနစ်ကောင်း တစ်ခု ကို ရအောင် အပြောင်းအလဲ မလုပ်နိုင်သမျှ တော့ ဘယ်သူ တက်တက် ဘယ်သူလာလာ အများစီးပွါး ကို ဦးတည်ရာကနေ ကိုယ့်အကျိုး စီးပွါး အတွက် မြင်ရင် ပြောင်းသွားဖို့ များပါတယ်။
အဲဒီလို လူ တွေ ကို ထိန်းနိုင်မဲ့ “စနစ်ကောင်း လေး” အတွက် ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ ဒီ တစ်ကြိမ်လေးထဲပါ။
မသေချာနိုင်မဲ့ နောင်တစ်ချိန် ဆိုတာ ကို မမျှော်လင့်ကြပါနဲ့။
အခု လောလောဆယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့သူ့ပါတီ က ဘဲ ဒီလို စနစ်ကောင်း ကိုရ အောင် လုပ်နေတာ ဆိုတာ ငြင်းလိုကြပါသလား။
.ငြင်းချင်လဲ ဘယ်သူခေါင်းဆောင် တဲ့ ဘယ်ပါတီ က တော့ ဘယ်လို စနစ်ကောင်း ကို ပြောင်းနိုင်အောင်လုပ်ပေးမှာ လို့ “ယုတ္တိရှိရှိ” ပြောပြပေးပါ။
ကျွန်မတို့ အဲဒီမှာ ဝင်ပြီး ပြိုင်တူ တွန်းပေး ပါ့မယ်။
အပြင်က နေ ဝေဖန်ရေး လုပ်ရတာ အင်မတန် လွယ်တာ သိကြမှာပါ။
ဘယ်သူက တရားတဲ့ ဘက်က ရပ်မှာလဲ၊ ဘယ်သူ က မတရားမှု တွေ လုပ်နေလဲ ဆိုတာ အသိသာကြီး မြင်နိုင်ပါတယ်။
.လောကကြီး က အပြစ်ကင်း တဲ့ အကောင်းဆုံး တစ်ခု ကို ဘယ်တော့ မှ မပေးတာမို့
အပြစ်အနာတွေ ထဲ က အဖြူစင် အရိုးသား ဆုံး ကို မြင်ပြီး အချိန်မှီ လက်ထဲ ရယူနိုင်ကြပါစေ။
လူပေါ်မှာ အားကိုးပြီး နေနေ ရတဲ့ ဘဝမျိုး ကို စိတ်ပျက်လွန်းလို့ ပါ အရပ်ကတို့ ရယ်။
ဒီတစ်ခါထဲပါ။ နောက်ဆုံး အခွင့်အရေးပါ။
အနော်ကတော့ ရှင်းတယ်အရီး သေခါနီးကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ပြန်ကြည့်ရင်
ကိုယ်ပါဝင်လို့ရခဲ့တဲ့ သဲတပွင့်နေရာမှာ နောင်တကင်းကင်းနဲ့ ရပ်တည်ပေးမယ်
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း လက်လှမ်းမှီသလောက် ကြိုးစားပေးတယ်
(ဥပမာအလုပ်ထဲ မဲပေးဖို့ ဇာတိပြန်မဲ့သူကို ခွင့်ပေးတယ် မပြန်နိုင်တဲ့သူတွေ ဒီမှာ ပုံစံဖြည့်ရင် အာမခံလက်မှတ်ထိုးပေးတယ် မောနင်းမီတင်မှာ မဲစာရင်းစစ်ဖို့ မဲပေးဖို့ ပြောပေးတယ် အချိန်ရရင် ဘာကြောင့်မဲပေးသင့်တယ်ဆိုတာပါ ပြောပေးတယ်)
တိုင်းပြည်အတွက် စွန့်လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့လူတယောက်ကို ဘာအတွက်နဲ့မှ မယုံနိုင်စရာမရှိဘူး
သူမရှိတဲ့နောက်မှာလည်း သူ့လိုလူထပ်မရနိုင်တောင် တိုင်းပြည်ကို စေတနာရှိတဲ့သူ တကယ်လုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူကို အမှန်အကန် ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိအောင် လမ်းဖောက်ပေးနိုင်ခဲ့မယ်လို့ ယုံတယ်
မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့အခါ မြတ်စွာဘုရားအစား ဓမ္မကို ထားခဲ့တယ် ဆိုသလိုပဲ
ရေရှည်ကောင်းဖို့ မူကောင်းတစ်ခုရအောင် အရင်ဆုံး ညီညွတ်ကြရမယ်။
ဘီဘီစီ အင်တာဗျူးတခုမှာ ကွယ်လွန်သူ သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာသန်းထွန်းက သူအနှစ်သက်ဆုံး သမိုင်းတွင်ရစ်မည့် တိုင်းပြု ပြည်ပြု ခေါင်းဆောင်ပြောပါဆိုတော့ ဒေါ်စုမပါဘူးဗျ၊ ဘုရင်တပါးကိုရွေးတယ်။ ဆိတ်ထဲမယ် ဘဝင်မကျဖြစ်ဖူးတယ်။ ခုတော့ ဆရာကြီးမှန်ကြောင်း လာဘ်ခံပါပြီ။ ဒေါ်စုမှာ အားနည်းချက် ရှိတာ ငြင်းမြဘူး.. သို့သော်ယခုအချိန်သည် တိုင်းပြည်ကို မြောင်းထဲဆွဲခြထားတဲ့ စစ်အာဏှာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး အနှစ်၂၀မှာ တခါသာ ပေါ်ဓါတ်သည့် မဟာအခွင့်အရေးဖြစ်သာမို့ အန်အယ်လ်ဒီကို မဲပုံပေးကြပါ။ ဘွားဒေါ်နဲ့ နောင်မှာ စာရင်းရှင်းဆရာ ရှိတာရှင်းကြ။။။
အဲဒီ အင်တာဗျူး ကို အခုမှ ကြားဖူးလို့ ကျေးဇူးပါ ကြောင်ကြောင်။
အဲဒီကနေ ကိုယ့်ဟာကို တွေးလိုက်တာ လေး ကို ကိုယ့်ဟာကို သဘောကျမိလို့ မျှလိုက်မယ်။
ကျွန်မ ကို လာပြီး “အနှစ်သက်ဆုံး လေးစားရဆုံး ယောကျာင်္းတစ်ယောက်” ကို ပြောပါလို့ လာမေးရင်ပေါ့။
သေချာတာက အခု ကျွန်မ ရဲ့ ဘေးက ကျွန်မ နဲ့ အေးအတူ ပူအမျှ ဘဝတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ သူ ကို ရွေးမှာမဟုတ်။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူက ကျွန်မ နဲ့ တကဲ့လက်တွေ့ဘဝ ထဲ ရုန်းကန် နေသူလေ။
သူ့ဆီမှာ ကျွန်မ အထင်ကြီးတဲ့ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ အရည်အချင်းတွေ ကို မြင်သလို ကျွန်မ မကြိုက်တဲ့ အင်မတန် ညံ့ တဲ့ ဟာကွက်တွေလဲ မြင်နေရတာမို့ပါဘဲ။
ဒီတော့ ကျွန်မ ရွေးမယ် ဆိုရင် ဦးအောင်ဆန်း လဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ မစ္စတာဂျော့ဘ်လဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။
သေချာတာ ကတော့ တကယ်လို့များ ကျွန်မ မှာ သူတို့ နှစ်ယောက် နဲ့ လဲ နီးနီးကပ်ကပ် အလုပ်လုပ်ခွင့် ရခဲ့ ရင်လဲ သူတို့ ကို ရွေးချင် မှ ရွေးလိမ့်မယ်။
.ကြောင်ကြောင် ပြောတဲ့ ဆရာကြီး ရွေးလိုက်တဲ့ ကိုယ်မမှီတော့တဲ့ သမိုင်းထဲက ဘုရင် လဲ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
လက်တွေ့ ဘဝ အတွက် ကိုယ့်ကို ခွန်အား ပေးနေသူ ဟာ အိမ်မက်ထဲ က လို ခြောက်ပြစ်ကင်း သဲလဲစင် သူ မဟုတ်နိုင်တာ ကို လက်ခံထားတာပါ။
အဲဒါက သူ့ကို အထင်သေးတာမဟုတ်စေရ။
အပြစ်ဖို့ အပြစ်တင်ဖို့ မဟုတ်ရ။
အားမကိုး တာ မဖြစ်စေရ။
သူ နဲ့ တွဲပြီး အလုပ်လုပ်လို့ မရတာ မဖြစ်စေရ။
သူ့အားနည်းချက် ကို ဖြည့်နိုင်ဖို့ ကိုယ့်ဆီ မှာ အဲဒီ အားသာချက် ရှိအောင် သာ ကြိုးစားရမယ်။
ဘဝ ရည်မှန်းချက် မပျောက်အောင်၊ ပိုပြီး တိုးတက်အောင် နှစ်ယောက် လက်တွဲညီကြဖို့ ကို ဘဲ ဂရုစိုက်ရမယ်။
သူ့ ကို ရွှေကလပ်ပေါ်တင် ကိုးကွယ်ဖို့၊ ပြတိုက်ထဲ ထားဖို့ ရွေးခဲ့တာမှ မဟုတ်တာ။
ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန် မှာ ကျွန်မတို့ ကလေး က “သူ့အဖေ ဟာ သူ့အတွက် လောကထဲ အလေးစားဆုံး ပါလို့ ပြောရင်လဲ ပြုံးပြီး ကျေနပ်စွာ လက်ခံမှာပါဘဲ။
လက်တွေ့မပါဘဲ အိမ်မက် စိတ်ကူးနဲ့ချည်း ပုံဖော်ထားရင်တော့ တော်ရုံ အပြစ်မြင်ဖို့ ရှားပါတယ်။
လက်တွေ့မှာ ဘဝ က အိမ်မက်ထဲ က စိတ်ကူး တွေ လောက် မလှဘူးလို့ အမြဲ သက်သေပြနေတဲ့ လောကကြီး ရဲ့ သဘောသဘာဝ ကို နားမလည်ဟန် ဆောင်နေသလား။
အိမ်မက်ထဲ က သူရဲကောင်းဝါဒီ ကို စွဲ နေတာ တကယ်တော့ ….
“တစ္ဆေ နင် ကိုယ်တိုင်ပါဘဲလား” ကြောင်ကြောင် ရယ်။
မှတ်ချက် – လောကကြီး ထဲ ကိုယ့် ယောကျာင်္း ကိုသာ တလေးတစား ဘုရားလို ကိုးကွယ်တတ်သော မိန်းမ များ ကိုလဲ အမှန်ပင် လေးစားပါသည်။
(ကိုယ့် အမေ အပါအဝင်ပါဘဲ) :-)))))
ရက် ၄၀ ပါပဲ
အာဏာရှင်နဲ့ တန်တဲ့ တိုင်းးပြည်လားးး
ပြည်သူ့ အာဏာပေးးမယ့် အရပ်သားး အစိုးးရနဲ့ တန်တဲ့ တိုင်းး ပြည် လားး ဆိုတာ
အဖြေ ကို သိရတော့မှာပါ..
မယ်ပုလေး၊ ချစ်မမ နဲ့ ဇီကလေး
မမ စကားကို စိမ်းထားတယ်။
တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းထဲတူညီစိတ် ရှိတဲ့ ညီအစ်မ တူမလေး များ ရှိနေတာ ဘဝ မှာ ဆုလာဘ်ပါ။
တစ်စိတ်တစ်ဝမ်း မဟုတ်ဘဲ ကြုံလာတော့လဲ တော်ထားလိုက်ရတဲ့ မောင် တစ်ကောင် ရှိနေတာလဲ ဘဝ မှာ အင်အားပါ။
ဒီတော့ အားပိုကြီး အောင် ငြင်းလိုက်ဦးမည်။ lol:-)))
ဒီနေ့ ပြန်ဝန်ဌာန Website Page မှာ “မြန်မာကသာမက ကမ္ဘာကပင်လေးစားရသည့် စံပြပုဂ္ဂုလ် ဦးသန့်နေထိုင် ခဲ့ရာ အိမ်ဂေဟာ” ဆိုပြီး သတင်းလုပ်ထည့် နေတယ်။
၁၉၇၄ ခုနှစ် တုန်း က ကျောင်းသားတွေ အဲဒီ အတွက် သဲသဲလှုပ် ခဲ့တာ ကို အပြစ်မြင်ပြီး နှိပ်ကွပ် ခဲ့ တဲ့ သမိုင်း က တော့ ဘယ်တော့မှ ပျောက်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
အခုလဲ ဒီလို ဘဲ ကမ္ဘာက အင်မတန်လေးစား နေရတဲ့ အမျိုးသမီးကြီး သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေဆဲ။
ဦးနေဝင်း အညိုးကြီးတာထက်တောင် အညိုးကြီး နေတဲ့ လူတစ်စု ရဲ့ အမျိုးမျိုးသော နည်းတွေ နဲ့ ရန်ပြု အနှောက်အယှက် တွေ နဲ့ သူ့ကို မတရားဖိနှိပ်ဆဲ။
ဒါကို ဒီအချိန်လေးမှာ မှ ဒီအမျိုးသမီးကြီး ကို တတ်နိုင်သမျှ မပံ့ပိုး မထောက်ခံ ပေး ကြရင် တစ်နေ့ သမိုင်းစာမျက်နှာထဲ မှာ မျက်နှာဖော်ဖို့ မသင့်ဘူး လို့ဘဲ ဆိုပါ့မယ်။
ဘယ်သူက မတရားလုပ်နေလဲ၊ ဘယ်သူက မတရားမှု ကို ဖယ်ဖို့ လုပ်နေလဲ။
NLD အနိုင်ရခဲ့ရင်လည်းမိမိအပါအ၀င် ဘယ်မွတ်စလင်မ်မှ သမ္မတဖြစ်စရာ လုံးဝမရှိပါလို့ ဦးကိုနီပြောပြီ
မေးမြန်းချက် (ရုပ်သံ), ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ / စက်တင်ဘာလ ၂၃၊ ၂၀၁၅၊ ည ၁၀:၂၉ နာရီ /
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲအပြတ်အသတ်အနိင်ရခဲ့ရင်လည်း မိမိသာမက အခြားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့လည်း သမ္မတဖြစ်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူးလို့ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကိုနီက Myanmar Muslim Media ရဲ့မေးမြန်းချက်တစ်ရပ်မှာ ပြတ်ပြတ်သားသားပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဦးကိုနီရဲ့ ပြောကြားချက်အပြည့်အစုံကို အောက်ပါရုပ်သံဖိုင်မှာဆက်လက်ကြည့်ရှု့နိင်ပါတယ်။
“မေးခွန်းမေးတဲ့လူကိုတော့ ဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး ဒါကတော့ သူ့စိတ်ထဲ သူသိချင်တာကို သူမေးတာပါ။ အဲ့တော့ NLD ပါတီကိုဦးဆောင်နေတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်နေတာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အင်မတန်ကိုအမြော်အမြင်ကြီးတယ် အင်မတန်ကိုသတ္တိရှိတယ် သူဟာရှေ့ရေးကိုလဲ အတော်ကိုတွေးတတ်တယ် ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံလတ်တလောဖြစ်နေတဲ့ အကျပ်အတည်းတွေကိုလဲ သူဟာကောင်းကောင်းနားလည်တယ် ပြီးတော့ သူထုတ်ပြောနေတဲ့စကားထဲမှာ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် စကားတွေကိုကုန်အောင်ပြောလို့မရဘူး နောက်ဆုံးသူဘာပြောသတုန်းဆိုတော့ တကယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့ အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရခဲ့ရင်တောင် အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကိုဦးတည်တဲ့အစိုးရမျိုးပဲဖွဲ့မယ်လို့ သူကပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲ့တာကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနိုင်ရခဲ့ရင် သူဘယ်သူ့ကိုသမ္မတတင်မလဲဆိုတာ တိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့်လူမျိုးကိုပဲ သမ္မတတင်မှာပါ ဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်အောင် ဆူပူမှုတွေဖြစ်လာအောင် သူစဉ်းစားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကိုမေးခွန်းမေးတဲ့လူက ဒါ သူဂွတိုက်ပြီးမေးတာမျိုးဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ သမ္မတဖြစ်စရာအကြောင်းလဲမရှိပါဘူး ကျွန်တော်တို့ဟာ လူနည်းစုတွေပဲ သမ္မတဆိုတာဟာ လူအများစုထောက်ခံတဲ့ လူအများစုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့လူတွေပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူး တစ်ခြားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ထဲကလဲဖြစ်နိုင်ချေမရှိပါဘူး ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာအများစုဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာ ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပဲ သမ္မတဖြစ်ဖို့အလားအလာများပါတယ်။”
အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေအပါအ၀င် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ဘာသာရေးနည်းနဲ့ လှည့်ဖြားတိုက်ခိုက်နေသူတွေက NLD အနိင်ရခဲ့ရင် ဦးကိုနီကို သမ္မတလောင်းစာရင်းတင်သွင်းနိင်သယောင်ယောင်ဝါဒဖြန့်လုပ်ကြံတဲ့မေးခွန်းတွေကို Facebook လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာအဆက်မပြတ်ဖြန့်ချိလျှက်ရှိနေပါတယ်။
ကိုပေါက်(Myanmar Muslim Media CJ)
U Ko Ni Youtube Video
သူမရှိတော့ရင် ဆိုတဲ့စကား အခါခါကြားနေရတယ်
သူလိုလူနောက်တစ်ယောက်မရှိဘူးဆိုတာ အကြွင်းမဲ့ ယုံထားတယ် ဒါပေမယ့်
သူမရှိတော့ရင် ဆိုတာကို သူလဲ သိတဲ့အတွက် သူချစ်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက် အားကိုးရာထားခဲ့မှာပါ
ဒီအတွက်သူကြိုးစားနေတယ် ကျွန်မတို့အတွက်မမှီရင်တောင် နောင်လာနောင်သားတွေအတွက်
ကျွန်မတို့ အတူတူ သူ့ကို ကူကြရပါမယ်….
ဒီအရွယ်တွေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ် အတွေ့ကြုံ ရင့်ကျက်မှာလဲ။
နိုင်ငံရေး စီမံအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက် သိပ်ငယ်လွန်းသေးတယ်။
ဒီလူတွေကို မဲပေးမိရင်တော့ တိုင်းပြည်အတွက်
ပိုဆိုးလာဖို့ပဲ ရှိတယ်လို့ ပြောတဲ့ လူတွေ….
(ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) အသက် ဘယ်လောက်မှာ
နိုင်ငံတစ်ခုလုံး (နယ်ချဲ့) လက်အောင် ကနေ
လွတ်မြောက်လာအောင် စပြီး ကြိုးစားခဲ့လဲဆိုတာကော
(ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ….
စဖြစ်တော့ (ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) အသက် က (21)ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့တွေ သိမယ်မထင်ပါဘူး။
(ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) အသက် က (25)နှစ်တောင်..
…မရှိသေးတာလည်း ခင်ဗျားတို့တွေ သိမှာမဟုတ်ပါဘူး လေ။
(ရဲဘော်)/သုံးကျိပ်နဲ့ (ဂျပန်)မှာ စစ်ပညာသွားသင်ပြီး
လွတ်လက်ရေး စရတဲ့ အချိန်မှာ
(ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) အသက် က (28) ပဲ
ရှိသေးတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိမယ်ဆိုရင် ဒီလိုဝေဖန်မှာ
ပင်လုံးစာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုး တိုင်းရင်းသားတွေကို
(ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) အသက် (30) ကျော် အရွယ်လေးနဲ့ပါ။
ခင်ဗျားတို့ သိတဲ့ (အာဇာနည်)နေ့လို့ ခေါ်နေကြတဲ့
အသက်ဟာ (32)နှစ်/6လပဲ ရှိသေးတယ်ဆိုတာ
ခင်ဗျားတို့လို ဆန်ကုန်မြေလေးတွေ (သမ္မတ) ဖြစ်နေတော့
ဒါကြောင့် ပြန်သူပါတီ NLD အသက်ငယ်ပေမယ့်
အမေ ထားခဲ့မယ့် အား နဲ့
တကယ်ပြောတာပေါ့ နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးလို့ တွေးမိတဲ့အချိန်မှာ ခြေချော်လက်ချော်သာ ဖြစ်ခဲ့ရင် ကိုယ့်ဘဝကို ဘယ်နားသွားထားရမှန်းတောင် ကိုယ်မသိဘူး။